21 January 2016 / nothing
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ တစ်နှစ်ပတ်လုံးက အချိန်ဘယ်လို ကုန်လိုက်မှန်းမသိ ကုန်သွားတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ အရာအားလုံးကို အစ ကနေပြန်စလိုက်ရသလိုပဲ။ ရောက်တုန်းက အစ်ကို့အကူအညီနဲ့ တစ်လလောက် အဆင်ပြေပြေနေလို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုရလိုက်တယ်။ ကိုရဲလင်း အကူအညီနဲ့ အလုပ်ရဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ အလုပ်နဲ့အဆင်ပြေဖို့ အိမ်နေရာပြောင်းဖို့ ဖြစ်လာတော့ လက်ထဲမှာ ပေးဖို့ ပိုက်ဆံက S$50 လားပဲ။ Deposit ကော One-month Rental ပါပေးဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ပထမဆုံး လခလည်း မရသေး။ အဲ့တုန်းကသာ မဒီဒီး မကူညီခဲ့ရင် အခုလောက်ဆိုလမ်းဘေးရောက်နေလောက်တယ်။
အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မှာတုန်းက PHP နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ အများဆုံးလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရောက်တော့ node.js နဲ့ လုပ်ရကော။ သုံးနှစ်လောက် ရန်ကုန်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ exprience ကော၊ learning အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အသစ်တွေကို လေ့လာရတာ မခက်ခဲတော့ဘူး။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက node.js နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာခဲ့ဖူးပေမယ့် တကယ်တမ်း အလုပ်ခွင်ဝင်တဲ့အခါမှာ tutorial တွေထဲက အတိုင်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လေးတွေ မဟုတ်တော့ အစပိုင်းမှာ development နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အားနည်းတာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ MongoDB University မှာ node.js + mongodb course တစ်ခုကို ပြီးအောင် တတ်လိုက်တယ်။ အဲ့ကနေ အတွေ့အကြုံတော်တော် များများရလိုက်တယ်။ သုံး လေး လလောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာ node.js+mongodb ကို production အတွက် အသုံးပြုတတ်လာတယ် (အသုံးပြုတတ်လာတယ်ဆိုတာ ထဲထဲဝင်ဝင်သိလာတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့)။ iOS development ပိုင်းကို အစပိုင်းမှာ လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း ကိုယ်တကယ်လုပ်နေတဲ့ အပိုင်းမှာပဲ သေချာသိအောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး node.js ကို ဒုံးဒုံးချ လုပ်နေတာ အခုအချိန်အထိပဲ။
စင်္ကာပူ ရောက်စတုန်းကနဲ့ Heroes of the Storm public beta စပေးတဲ့အချိန်နဲ့ ကြုံတော့ ကံကောင်းပြီး beta key နဲ့ စဆော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲ့တုန်းက DotA2 ကို သေသေချာချာ မဆော့မိသေးလို့လားပဲ တော်တော်ကြိုက်တယ်။ Player level maximum ရောက်တော့ teammates တွေမရှိတာနဲ့ ဆက်မဆော့ဖြစ်တော့ဘူး။ အဲ့နောက် World of Warcraft ပြန်ဆော့ဖြစ်တယ်။ အခုထိလည်း ဆော့နေတုန်းပဲ၊ ပြီးတော့ DotA2။ MMORPG တွေဆော့မိရင် တခြား ဂိမ်းတွေက မဆော့ဖြစ်တော့ သလောက်ပဲ။
နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက် ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပေမယ့် အလုပ်တွေများတာကြောင့်ကော တခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ပါ မပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ တခြားသူတွေက ရေမြေခြားရောက်ရင် အိမ်နဲ့ မွေးရပ်မြေကို လွမ်းတတ်တယ်တဲ့။ ပြဿနာက အဲ့လိုခံစားချက် မဖြစ်တာပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါ သတိရပေမယ့် အဲ့လိုမျိုး ပြန်မှဖြစ်မယ် လွမ်းတယ်ဆိုတာကတော့ မဖြစ်မိဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် အလုပ်၊ anime နဲ့ game နဲ့တင် အချိန်ကို မနည်းလုနေရတယ်။ ပြဿနာတွေ အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၅ မှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ ခံစားမိတာ အမှန်ပဲ။
I was lost in the past until i found her. She gave mealight of hope and I want to make sure it happens.
Setting Up Ventrilo Music Bot on Mac
Asafellow MMORPG player, I've to use Ventrilo much for dungeons and raids. It is really borning if you are the only one person in vent. So, I tried setting up Music
World of Warcraft Novels
It's been years since I started reading and collecting WoW Novels. Although I didn't haveachance to buy original one, so all I haveacollection of all over internet. This is
K © 2018